वाशिंगटन डिसी लगायत अमेरिकाका विभिन्न शहर तथा राज्यमा बिशाल महिला जुलुस प्रदर्शन - Enepalese.com
आइतबार, असोज ११ २०७७
वाशिंगटन डिसी लगायत अमेरिकाका विभिन्न शहर तथा राज्यमा बिशाल महिला जुलुस प्रदर्शन
इनेप्लिज २०७६ माघ ५ गते १२:३९ मा प्रकाशित
अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डिसी लगायत विभिन्न राज्यमा बिशाल महिला जुलुस प्रदर्शन भएको छ । गत जनवरी १८ का दिन वाशिंगटन डिसी,न्युयोर्क,लस एन्जेलस ,डेनभर लगायत शहरहरुमा महिलाहरुले बिशाल जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।
हजारौको संख्यामा स्व-स्फ़ुर्त रुपमा महिलाहरु भेला भएका थिए भने जसमा जलवायु परिवर्तन, तलब समान ,प्रजनन अधिकार र आप्रवासन जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित थिए।
सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सपथ ग्रहण गरेको भोली पल्ट देखि सुरु गरिएको अभियान यस बर्ष चौथो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । जसको मुख्य उद्देश्य महिलाको राजनीतिक शक्ति उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि विगतका वर्षहरू भन्दा सहभागिता कम रहेको थियो
अमेरिकाको १ सय ८० भन्दा बढी शहरहरूमा जुलुस प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य शनिबार निर्धारित गरिएको थियो। यस्तै गरि न्युयोर्कको कोलम्बस सर्कल तथा फोले स्क्वायरमा पनि भब्य प्रदर्शन सहित नारा लगाइएको थियो ।
“आज, हामी परिवर्तन हुनेछौं र यस संसारलाई आवस्यक छ । हामी हाम्रो शक्तिमा वृद्धि गर्ने छौ भन्ने नारा लगाईएका थिए । वाशिंगटन डिसीमा आयोजना भएको भेलामा जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन र प्रजनन अधिकार विषयहरूमा केन्द्रित थिए।
जुलुस प्रदर्शनमा ,उठ्नुहोस् ! आप्रवासी न्याय ! उठ्नुहोस् ! मेरो शरीर मेरो विकल्प ! उठ्नुहोस् ! पृथ्वी विपत्तिमा छ ! उठ्नुहोस् ! अब ट्रम्पलाई हटाउनुहोस् ! जस्ता नारा लगाइएका थिए ।
प्रदर्शनकारी महिलाहरुले व्हाइट हाउस अगाडी हेर्दै “दमनकारी राज्य बलात्कारी हो। बलात्कारी तपाईं हो।” भन्दै औला व्हाइट हाउस तिर देखाएका थिए । उक्त गीत दक्षिण अमेरिकी देश चिलीको प्रसिद्ध गीत हो । उक्त गीत चिली देशको प्रदर्शन अंश हो जुन विश्वव्यापी रूपमा नारीवादी आन्दोलनको गान बनेको छ।
महिलाको जुलुस प्रदर्शनको उद्देश्य भनेको विभिन्न महिलार उनीहरूको समुदायहरूको राजनीतिक शक्तिलाई परिवर्तन गर्ने र परिवर्तनकारी सामाजिक परिवर्तन सिर्जना गर्नु हो।
वुमेन मार्च अर्थात् महिला भेला प्रदर्शन एक महिला-नेतृत्वको आन्दोलन हो । जुन विभिन्न विषयहरूमा अन्तर्देशीय रुपमा शिक्षा प्रदान गर्दछ र नयाँ तल्लो स्तरका कार्यकर्ता र आयोजकहरूको लागि प्रशिक्षण, पहुँच कार्यक्रमहरू र कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट उनीहरूको स्थानीय समुदायमा संलग्न हुन प्रवेश स्थलहरू सिर्जना गर्दछ।
महिलाको जुलुस प्रदर्शन अहिंसात्मक प्रतिरोध र आत्मनिर्णय,मर्यादा र सम्मान द्वारानिर्देशित समावेशी संरचना निर्माणको माध्यमबाट उत्पीडनको प्रणालीहरू भत्काउन प्रतिबद्ध छ।
श्रोत :विभिन्न संचार माध्यम/गुगल खोज ,तस्बिर :अलजजिरा अमेरिका
तौल घटाउन मैले गरेको प्रयास
मैले कोरोनाले रोएको देखेको छु
निन्द्रा नै हाम्रो सर्वस्व हो
मेरिल्याण्डको एक घरमा कार ठोकिएर आगलागी हुँदा चालकको मृत्यु,,घरभित्रका ४ जना बालबाल बचे
भर्जिनियाका गभर्नरका राल्फ नर्थाम तथा उनकी पत्नि कोरोनाबाट संक्रमित
भारती गौतमले ल्याइन ‘विगत र बाडुली’
मेरिल्याण्डमा महामारीको नियमलाई उल्लघंन गर्दै भोजभतेर गर्ने कारागार चलान ,५ हजार डलर जरिवाना
अमेरिकामा एकैदिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५५ हजार,९ सय ५२ जनाको मृत्यु